“F’IZA KOA IO ?” -
AccueilTresaka“F’IZA KOA IO ?”
“F’IZA KOA IO ?”
28/11/2016 admintriatra Tresaka 0
Dia miarahaba ny ekipa rehetra nikarakara ny fandraisana iny Frankofonia iny aloha fa tena tsy nitsanga-menatra mihitsy i Madagasikara ary tena tomombana an-tsakany sy an-davany ny fandraisana. Fa tolorana fisaorana manokana ny vahoaka malagasy naneho teo imason’izao tontolo izao fa olo-mendrika sy manana izany fahaiza-miaina izany.
Nahafinaritra loatra ny nahita ireo filoham-pirenena am-polony maro nanotrona ilay fihaonamben’ny Frankofonia teny amin’ny CCI Ivato. Any amin’ny 50 taona mahery any indray tokoa mantsy vao mety hiverina handray izany Frankofonia izany isika eto Madagasikara. Fifanarahana am-polony maro avy amin’ireo firenena vahiny no vita sonia, fifanarahana ara-toekarena sy sosialy hanome tosika ny politikam-pampandrosoana efa natomboky ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra izay roa taona monja nitondrany ny firenena izay. Voaporofo koa izao tena fa tafaverina tantreraka ny fitokisan’ireo firenen-dehibe an’ity Tanindrazantsika ity taorian’ireny fanonganam-panjakana notarihan-dRajoelina sy ny forongony ireny.
Momba izay Rajoelina izay indrindra no itondrana ny tafa sy dinika androany. Samy nanontany tena avokoa ny olona nanatrika ny fanokafana ny Frankofonia teny amin’ny CCI Ivato rehefa nahita ity lehiben’ny fanonganam-panjakana ity ary nametra-panontaniana hoe “f’iza io?”, “fa inona no ataon’io eo?”, “f’angaha tsy eny amin’ny digue miaraka amin’ny ekipany avy ao amin’ny MLE sy ny Miara-manonja?”.
Izay no tena mahavariana amin’ireto ekipan’ny mpanongam-panjakana ireto. Hafa ny vava avoaka ary hafa ny zavatra atao. Mitovy amin-dry Heritiana ao amin’ny RTA ihany e! Toraka izany koa no ataon-dRajoelina, ny ekipa asaina milanja sora-baventy eny amin’ny “digue” fa ny tenany kosa mila ranondranony eny amin’ny CCI Ivato. Raha tamin’ny andron-dRajoelina angamba no mba nisy fihaonambe iraisam-pirenena tahaka ny Frankofonia, na ireo efa maty any am-pasana aza angamba notaomina tamin’ny kamiao mba hanatrika izany. Atao ahoana e! Samy gaga daholo ny olona hoe “f’iza koa io?”.